Chisungo chakakosha pakati peAfrican Tourism Board nehumambo hweEswatini
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Chisungo chakakosha pakati peAfrican Tourism Board nehumambo hweEswatini
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Eswatini Breaking News • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Iyo African Tourism Board uye Humambo hweEswatini hwakanga hwaumba mubatanidzwa wakanyanya kukunda kubva pakutanga kweATB kuWorld Travel Market muCape Town mu2019.
Sachigaro weAfrican Tourism Board Cuthbert Ncube ari muhumambo nhasi uye akatambirwa nemufaro na Hon. Min Moses Vilakati, naEswatini Tourism Authority CEO naLinda Nxumalo, Chief Executive Officer (CEO) weEswatini Tourism Authority.
Iye Hon. Gurukota M. Vilaki vehumambo hweEswatini, vachitungamira Tourism neEnharaunda, vakatambirwa nasachigaro weAfrican Tourism Board Executive VaCuthbert Ncube.
Kushanya kwepamutemo kwakaitwa naSachigaro weATB kwakasimbisa hukama hwakakosha hweAfrican Tourism Board neEswatini.
Eswatini akabatana neAfrican Tourism Board pakuberekwa kuri pamutemo kwesangano muna 2019 kuWorld Travel Market kuCape Town.
Iye Hon. Gurukota reEswatini, Moses Vilikati, akashongedza VaMcube nechiratidzo chekugamuchira Humambo.
African Tourism Board nehumambo hweEswatini vakatanga mubatanidzwa wakakunda kubva pakutanga kweATB paWorld Travel Market muKapa muna 2019. Sachigaro weAfrican Tourism Board Cuthbert Ncube ari muHumambo nhasi uye akatambirwa nemufaro. Hon. Minisitiri Moses Vilakati, Eswatini Tourism Authority CEO, naLinda Nxumalo, Chief Executive Officer (CEO) weEswatini Tourism Authority.
Executive weTB uye vaimbova Gurukota rezvekushanya kuZimbabwe, Dr. Walter Mzembi, vakataura kuti: “Basa rakanaka, Sachigaro. Humambo hweEswatini hwave mutsigiri akasimba uye asingachinji weATB. Bravo kuna Minister Vilakati uye timu yekutambira kwakanaka.
Eswatini, zviri pamutemo Humambo hweEswatini uye dzimwe nguva yakanyorwa muChirungu seSwatini, yaimbove uye ichiri kuzivikanwa muchirungu seSwaziland. Iyo nyika yakavharirwa muSouth Africa uye yakapoteredzwa neMozambique kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva neSouth Africa kuchamhembe kwayo, kumadokero, nekumaodzanyemba.
Humambo hweEswatini inzvimbo yakakosha pasirese. Imwe yenyika shomashoma pasi rose ine humambo hwakakwana, Mambo Changamire, Mswai III, anonzwisisa kukosha kwezvekushanya netsika nenyika yake nevanhu vake. Iye anoona kushanya senge chinhu chekutanga pakudzoka kwehupfumi kubva padenda re COVID-19.
Nyika diki ine moyo wakakura uye vanhu vane hushamwari vane hushamwari inonyatsotsanangura Eswatini (Swaziland) - nyika inova imwe yemamongi monarchies muAfrica uye inogumbatira uye inosimudzira tsika dzayo yakasarudzika uye yekare. Vaviri humambo pamwe nevanhu veEswatini vanoshingairira kuchengetedza nekuchengetedza inoshamisa tsika yemagariro iyo ingangodaro isingaenzaniswi chero muAfrica. Vashanyi vanogona kuwana zano riri nani retsika dzechinyakare dzemuAfrica pano pane zvakanakisa kwese kwese mudunhu, uye zvinoonekwa, zvinosanganisira zvinoshamisa. mitambo, haina kungomutsidzirwa yedhora revashanyi asi iri iro chairo basa.
Inozivikanwa Umhlanga (Reed Dance) uye Incwala ndiyo mitambo yechinyakare inosanganisira makumi ezviuru zvevanhu veSwaziland uye inokwezva vashanyi vanobva kumativi ese epasi. Asi zvipfeko zvechinyakare, mhemberero, uye kutamba zvinowanikwa munzvimbo dzese dzenyika nguva dzese dzegore.
Vanhu veSwazi vanozvikudza uye vanhu vane hushamwari hwakanyanya. Vanogamuchira vashanyi nenyemwerero inopenya uye vanofarira kuratidza nyika yavo yakanaka. Uyezve huwandu hwe zvirongwa zvekushanya munharaunda, vashanyi vanokwanisa kuona hupenyu hwezuva nezuva muEswatini nekufona pa imba yepamba kana musha uko vachatambirwa zvikuru. Zvimwe, Mantenga Cultural Village inyanzvi yekuvaka patsva imba yechinyakare kubva kuma1850s, iyo inopa ruzivo rwezvinhu zvese zvakaoma uye nuances zvetsika dzechiSwati hupenyu, pamwe nekuratidzira kukuru kwekutamba kunoitwa neboka rinoshanya pasirese.
Ruzivo rwakawanda pane iyo African Tourism Board: www.africantourismism.com